Kufuphi kwi-Olympic National Park
Wamkelekile kwi-Olimpiki-yeSizwe, indawo yokuphumla yosapho ebekwe kumda kunye nokungena kunxweme lwePaki yeSizwe yeOlimpiki eRialto Beach. Ngaphandle kwanto ekwahlulayo kwiPaki, untywiliselwe eluxolweni nasekuzoleni phakathi kwemithi emikhulu yehlathi. Kule ndawo ineehektare ezingama-30+ ungakonwabela amakhulu eenyawo zomlambo ongaphambili kunye nesiqingatha semayile phambi kwePaki yeSizwe yeOlimpiki. Ukubaleka kwesalmon kuyamangalisa kwaye awuyi kukholelwa ...
...ukutshona kwelanga ukusuka ngasemlanjeni. Yonwabele iholide yakho kubunewunewu kweli khaya lale mihla le-Cape Cod elinendawo yomlilo yamatye kunye nekhitshi eligcweleyo. Izitayile zeShaker kunye neCraftsman ziqaqambisa ingaphakathi kwaye igumbi elikhulu livulelwa kumgangatho omkhulu ojonge emazantsi owandisa ukonwatyiswa kwakho kunye nokutshisa kwelanga. Eli likhaya lale mihla elinezixhobo ezitsha, izixhobo zombane kunye nefanitshala kunye ne-air conditioning elawulwa yikhompyutha kunye nobushushu, akukho zitshixo zifunekayo ukuze ungene ekhaya, ukukhanya kokukhanya kunye nezinzwa zenza ukuhlala kwakho kube lula kwaye kukhululekile.
Iscreen esikhulu seTV esine-ShowTime kunye nezinye iishaneli zeprimiyamu zikunika ukhetho lweemuvi, iindaba kunye neenkqubo zeTV. Isantya esiphezulu se-Intanethi kunye neWiFi nazo zikwabonelelwe ngolonwabo lwakho lokusasaza. Indawo yokusebenza yekhompyuter ibonelela ngokuhlala kamnandi kunye nezikhululo zokutshaja ze-USB ezininzi.
Iindwendwe ziphawula ukuba ikhaya libekwe ngokugqibeleleyo ukujonga i-Olimpiki yeSizwe yePaki kuba ikufutshane kakhulu kwizinto ezininzi ezinomtsalane. Ngelixa usekhaya ungayonwabela ielk, amaxhama kunye namaxhalanga anempandla enza ikhaya labo kufutshane. Ielk ziyayishiya iPaki ziye kudla idlelo elingaphantsi komgangatho kwaye amaxhalanga anempandla ahlala ngasemlanjeni apho ukhoyo umngxuma owuthandayo wokuloba. Akhe alwe namahlungulu ngasemva.
UKUHAMBA: Kukho iindlela kwipropathi kunye kufutshane kubandakanya iRialto Beach, Hole in the Wall, Lake Ozette, First/ Second/Third Beaches, James Lake kunye nabanye. Ukudibana kwe-Sol Duc, i-Bogachiel, i-Quillayute kunye ne-Dickey Rivers ziphakathi kweekhilomitha ezi-2. Ihlathi lemvula laseHoh, iLake Crescent, iSol Duc Hot Springs, iRuby Beach kunye neKalaloch Beach zonke zingaphakathi kweyure ukusuka apha. ILake Ozette luhambo nje oluziikhilomitha ezisibhozo.
UKULOBA: Kubantu abathanda ukuloba, ummandla ongaphambili womlambo uneyona mingxuma ibalaseleyo yokuloba iisalmon kulo mmandla yaye likhaya lelona shishini lokuloba i-steelhead elibalaseleyo eUnited States. IHalibut kunye nokuloba elwandle kuyafumaneka eLaPush. Ininzi indawo yokupaka iimoto kunye nezikhephe kwiitreyila kwaye kukho indawo yokumisa iintente ukuba ziyafuneka. Ibha yegrabile ecaleni kwepropathi yeyona ndawo ibalaseleyo yokuloba iimpukane kwaye yindawo entle yokuloba. I-Quillayute ibamba i-chinook, i-coho, i-sockeye kwaye ngamanye amaxesha i-salmon epinki. Iitrout eziqhutywa elwandle zininzi. Ilayisensi yokuloba ayidingeki ukuba ulobe kwi-Olympic National Park; kunjalo, kufuneka salmon simahla / irekhodi Steelhead catch ukuba ujolise ezi ntlanzi. Ibha yegrabile kwabelwana ngayo ne-Olympic National Park.
Iholide yokurenta ibekwe ekungeneni kwi-Olympic National Park kwaye yimizuzu emi-2 ukusuka kwisikhululo seMora Ranger kunye nemizuzu emi-4 ukuya eRialto Beach. Ivenkile encinci yegrosari kunye nerestyu ikwimizuzu emi-4 kude. Isiphelo esisemazantsi selifa sinomda woMlambo iQuillayute. Uninzi lweendwendwe zam ziye zaphawula ukuba sisiseko esihle kakhulu sasekhaya sokuphonononga iPaki yeSizwe yeOlimpiki ngemoto kwaye ngokuhlwa ibonelela ngokufikelela okumangalisayo kwiindawo zomdla kwimizuzu nje embalwa ukugqiba ukugcwalisa usuku. Gquba usuku lwakho ngokutshona kwelanga eRiato Beach okanye i-BBQ ekhaya.
Ndijonga imiyalezo yam ebhaliweyo kunye nee-imeyile rhoqo ukuze ungalibazisi ukufikelela ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Sibhukisha lonke ugcino lwethu kuphela nge-AirBnB. Inombolo yam inokufumaneka kwiphepha lam lewebhu kwi-Olimpiki-yeSizwe (i-AirBnB ayizukundivumela ukuba ndibelane nge-URL ukuze wazi ukuba wongeze ntoni na ekupheleni koko). Ungasifumana kwakhona kwi-****book.
Ndijonga imiyalezo yam ebhaliweyo kunye nee-imeyile rhoqo ukuze ungalibazisi ukufikelela ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Sibhukisha lonke ugcino lwethu kuphela nge-AirBnB. Inombolo…